September | 2020 | Radio Himilo
Himilo – Jose Mourinho, tababaraha kooxda Tottenham ayaa rumeysan in kooxda u baahan tahay inay soo qaadato xiddig weerarka kaga ciyaara kahor inta uusan xirmin suuqa isniinta ina soo aadan. Spurs ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqdo saxiixa xiddigaha Josh ...
Himilo – Koox khubaro ah oo baarta raadadka qadiimiga ah ayaa soo helay boqolaal raad oo la rumeysan yahay inay dhulka ku sawiranaayeen 120-kun oo sanno. Raadadkaan oo laga helay haro qadiimi ah oo ku taalla lama degaanka Nefud ee ...
Himilo – Maxkamad ku taalla Jermalka ayaa amartay in mar kale kor loo qaado aadaanka salaadda masjid ku yaalla waqooyiga dalkaasi. Annette Kleinschnittger, garsooraha xukunka riday ayaa sheegtay in bulsho waliba ay xaq u leedahay inay si xorriyad leh ugu ...
Himilo – Weeraryahanka xulka qaranka France hadda uma baahna u dhaqaaqitaanka kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford ee Manchester United. Ousmane Dembele ayaan xiiseeneynin ka tegitaanka Barcelona xilli uu xiiso ugu imaanayo kooxda Premier league ka dhisan ee Manchester United, ...
Himilo – In ka badan hal milyan oo ruux ayaa caalamka ugu geeriyootay xanuunka COVID-19, taas oo ka dhigan in 16-kii daqiiqaba uu geeriyooday hal qof amaba saacadiiba ay u dhinteen 226-ruux, sida lagu sheegay xogta bisha September. Wadamada Mareykanka, ...
Guddoomiye dib loo doortay isaga oo mootan laba todobaad
Himilo – Dadka dega xaafadda Deveselu, ee ku taalla koofurta Romania ayaa markii labaad u doortay Ion Aliman gudoomiyaha xaafaddaasi, inkastoo uu dhintay laba isbuuc kahor. Iyaga oo rumeysan inuu yahay ruuxa kaliya ee xilkaas u qalma, ayaa 64% dadkii ...
Himilo – Manchester City, waa kooxdii ugu danbeysay ee Premier League ee ku biirta raacdada loogu jiro saxiixa Napoli ee Arkadiusz Milik. Xiddigga xulka Poland ayaa si weyn loola xiriirinayay u dhaqaaqista Tottenham Hotspur, halka Manchester United sidoo kale la ...
Himilo – Sida ay ku warrameyso ESPN, Barcelona ayaa sameysay isku daygii ugu danbeeyay oo ay kula saxiixanayaan daafaca dhexe Manchester City ee Eric Garcia kahor 5-ta October xilligaasi oo ah wakhtiga ugu danbeeya ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Barcelona ...
Himilo – 14-boqolkiiba, cunnooyinka lasoo saaro dunida oo dhan waxey noqdaan kuwa khasaara oo waxey ku lumaan gacanta u dhaxeysa beeraleyda, ganacsatada, illaa laga soo gaaro macaamiilka, taas oo ay sii dheer tahay tan ay lumiyaan isticmaalayaasha. Markii la khasaariyo ...
PSG oo amaah ku dooneysa laacibka Chelsea ee Jorginho
Himilo – PSG ayaa billowday in ay wadahadal la furto kooxda Chelsea, kaasi oo ku aadan la saxiixashada khadka dhexe naadiga ee Jorginho oo ay ku doonayaan si amaah ah, sida ay werisay Caught Offside. 28-jirkaan, kaasi oo soo jiitay ...